४४ देश सहभागी जेनेभा सम्मेलनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले गरे ठूलो पहल, अब नेपालीले पाउनेछन यी सुविधा::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
४४ देश सहभागी जेनेभा सम्मेलनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले गरे ठूलो पहल, अब नेपालीले पाउनेछन यी सुविधा
काठमाडौं – स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव स्वदेश फर्किएका छन्। स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा ४४ देशका प्रतिनिधिको उपस्थितीमा आयोजित ‘हेल्थ वर्कर्स मोभिलिटी’ सम्मेलनमा सहभागी भई मन्त्री यादव मंगलबार स्वदेश फर्किएका हुन्।
उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता दुर्गा सुवेदी, समाजवादी युवा फोरमका हेमन्त राई, अशोक यादव लगायत नेता कार्यकर्ताले स्वागत गरेका थिए।
‘यहाँका डाक्टर, नर्स, बी।एनहरु विदेश गएर डब्लु एच ओ बोर्डको व्यवस्थाले सबै देशमा एकरुपता ल्याउने विषयमा काम भइरहेको छ, यस्तो प्रयोग जर्मन र पोल्याण्डमा छ। यसले विदेशमा रहेर यहाँको शिक्षा लिएका हेल्थ पर्सनहरुलाई इज्जत र खुबीअनुसारको काम दिलाउन सहज हुनेछ। विश्वभरी छरिएर रहेका हेल्थ कामदारको डाटा संकलन पनि गरिने छ। र सहयोग गर्न सकिनेछ’, मन्त्री यादवले भने।
हाम्रो देशमा आउनुपर्ने ठूलो सहायताको रकम सेभ द चिल्ड्रेनले कन्सलटेन्टको नाममा ठूलो रकम ९झण्डै २५ प्रतिशत० लिइरहेको जानकारी उनले गराए।